History of Pesticide Analytical Laboratory
ပိုးသတ်ဆေးဓါတ်ခွဲခန်းအား ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် UNDP/FAO ၏ငွေကြေး၊နည်းပညာ အကူအညီဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။Biological Control နှင့် Pesticide Management Project ဖြင့် UK နှင့် Hungary နိုင်ငံမှ ပညာရှင်များဖြင့် စတင်လည်ပတ် အကောင် အထည် ဖော်ခဲ့ပါသည်။ UNDP ငွေကြေးအကူအညီဖြင့် UK အပါအ၀င် အခြား EU နိုင်ငံများသို့ဓာတ်ခွဲခန်းပညာရှင်များအားရေတို၊ရေရှည်ပညာတော်သင်အဖြစ်လေ့လာ ဆည်းပူးရန်စေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။
PAL was established with the aid of UNDP/FAO in 1984.And it was started Biological control and Pesticide Management projects by UK and Hungary’s technician. With the aid of UNDP, the laboratory technicians are trained by designated to EU and UK countries in short-term and long-term training.
Responsibilities of Pesticide Analytical Laboratory
(၂) ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ကြွင်း စစ်ဆေးခြင်း။
(၆) ပြည်ပမှတင်သွင်းသည့် ပိုးသတ်ဆေးများထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးခြင်း။
Pesticide Quality Control analysis
Concerning the documentary works of Pesticide Registration Process.
Certification of Import Endorsement.
ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးအား မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်း ပြုလုပ်သောအခါ ပိုးသတ်ဆေး ဓာတ်ခွဲ ခန်းသို့ ဖော်စပ်ပြီး ပိုးသတ်ဆေးနမူနာ အရည်ဖြစ်ပါက (၁ လီတာ) နှင့်အမှုန့် (သို့မဟုတ်) အခဲဖြစ် ပါက ၁ ကီလိုဂရမ် ပေးပို့ရပါမည်။ ထို့ပြင် စံသတ်မှတ်ထားသော ဆေးအစစ် ၂ ဂရမ် ပေးပို့ရပါမည်။
(ခ) ပြည်ပမှ မတင်သွင်းမှီ အရည်အသွေးမှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ နှင့် မှတ်ပုံတင်စဉ် အရည်အသွေး အတိုင်းဟုတ်/မဟုတ် စစ်ဆေးခြင်း
ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးအား မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီး၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ် ရရှိပြီးပါက ပြည်ပမှ မတင်းသွင်းမှီ ၎င်းပိုးသတ်ဆေး၏ အရည်အသွေး ပြည့်မှီမှု ရှိ/မရှိ နှင့် မှတ်ပုံ တင်စဉ်က အရည်အသွေးအတိုင်း ဟုတ်/မဟုတ် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးရပါသည်။
(ဂ) ဈေးကွက်နမူနာအချို့ စစ်ဆေးခြင်း
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် ဈေးကွက်အတွင်း တောင်သူသုံးစွဲမှု့များသော ပိုးသတ်ဆေးများကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး ၊ ပြည်နယ်တာဝန်ခံများမှ နမူနာကောက်ယူပြီး ပေးပို့ လာသော ပိုးသတ်ဆေးများကို ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးရပါမည်။
(ဃ) အခြားဌာနဆိုင်ရာများမှ ပေးပို့သော နမူနာများ
အခြားသော ဌာနဆိုင်ရာများမှ ၎င်းတို့၏ဌာနအတွက် အသုံးပြုမည့် ပိုးသတ်ဆေးများအား အရည်အသွေးပြည့်မှီခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးပေးရပါသည်။
ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးအတွက် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးစမ်းသပ်ခမှာ မြန်မာကျပ်ငွေ သုံးသိန်း ဖြစ်ပါ သည်။
a. Registration Samples
The pesticides which are registered must be submitted to Pesticide Analytical Laboratory for liquid Type formulation 1 Liter and dust (or) granule formulation type 1 Kg. And (1gmx2) analytical standard also must be submitted together.
b. Quality Analysis of before importation that is accurate or not with before getting registration certificate.
The product this is already finished the registration process, it must be analyzed the quality of product before importation that is accurate or not before getting registration certificate.
c. Analysis of Market Samples
The pesticides that are the most useful to farmers were collected by each Regional and state plant Protection office and send to Pesticide Analytical Laboratory to analyze quality of these products with Director General of Department of Agriculture Guidelines.
d. Samples from other Department
We analyze Pesticide quality which is sending by other departments for quality cheek.
Analytical Fees for each product is 300000 Kyat.
Procedures of application for Pesticide Residue Analysis
မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်သွင်း(သို့) တင်ပို့မည့် စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များတွင် ပိုးသတ်ဆေးဓါတ်ကြွင်းပါဝင်မှု ရှိ/မရှိ ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးစမ်းသပ်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်၍ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရပါမည်။
၁။ တင်သွင်း (သို့) တင်ပို့လိုသည့် စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များ၏အမည်
၂၊ တင်သွင်း (သို့) တင်ပို့လို သည့်ကုမ္ပဏီအမည် နှင့် လိပ်စာ
တင်သွင်း(သို့) တင်ပို့လိုသည့် စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန် ၂၀ မက်ထရစ်တန်လျှင် နမူနာ ၁ ကီလိုဂရမ် (သို့) ၁ လီတာ ပေးပို့ရမည်။ ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးစမ်းသပ်ခကို နမူနာ တစ်မျိုးလျှင် ၃၀၀၀၀ ကျပ် နှုန်းဖြင့် သီးနှံကာကွယ်ရေး ဌာနခွဲ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးသွင်းရမည်။ အထက်ပါ အချက်အလက် များပြည့်စုံပါက ပိုးသတ်ဆေးဓါတ် ကြွင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုအဖြေအား ထောက်ခံစာထုတ်ပေးပါသည်။
Before importation or Exportation of agricultural product, shall duly fill the application form with the following particulars and submit to the director of Plant Protection Division, Department of Agriculture.
Original of sample
7.Amount to be imported/exported
The sample shall be submitted with 1 KGM / 1 LTR according to the specified sampling method. Importer or Exporter shall pay analytical fees 30000 Kyat’s for one sample to Plant Protection Division, Department of Agriculture. After scrutiny of above particulars and requirements, Pesticide Analytical Laboratory, Plant Protection Division issues certificate of residue analysis.
ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ခွဲခန်းမှ စစ်ဆေးနိုင်သော သတ္တုဒြပ်စင်များမှာ
၁။ Arsenic (As)
၂။ Lead (Pb)
၃။ Mercury (Hg)
၄။ Cadmium (Cd)
၅။ Chromium (Cr)
၆။ Iron (Fe)
၇။ Nickel (Ni)
၈။ Copper (Cu)
၉။ Manganese (Mn)
၁၁။Magnesium (Mg) တို့ဖြစ်ပါသည်။
စစ်ဆေးနိုင်သော နမူနာများမှာ သောက်ရေ၊ သုံးရေ နှင့် စိုက်ပျိုးရေးများ/ မြေနမူနာအမျိုးမျိုး ၊ အပင်နှင့် အပင်ထွက် ပစ္စည်းများ (ဟင်းသီးဟင်းရွက် + သစ်သီးဝလံ ) စားသောက်ကုန်များဖြစ်ပါသည်။
ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးစမ်းသပ်ခမှာ ရေနမူနာအတွက် ဒြပ်စင်တစ်မျိုးလျှင် ငါးထောင်ကျပ် (၅၀၀၀) နှင့် မြေကြီးနှင့် အခြားသော နမုနာများအတွက် ဒြပ်စင်တစ်မျိုးလျှင် ရှစ်ထောင်ကျပ် (၈၀၀၀) ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှု့ တွေ့ရှိချက်များကို Certificate ထုတ်ကာ အဖြေထုတ်ပေးပါသည်။ ဓာတ်ခွဲ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် နမူနာ Certificate ပုံစံဖြစ်ပါသည်။
​Pesticide Analytical Laboratory can analyze the following elements.
(1) Arsenic (As)
(2) Lead (Pb)
(3) Mercury (Hg)
(4) Cadmium (Cd)
(6) Iron (Fe)
(7) Nickel (Ni)
(8) Copper (Cu)
(9) Manganese (Mn)
The analyze samples are drinking water, water for other purpose, water for irrigation, various soil samples, plant and plant product (Fruit and vegetables) and other commodities.
Analytical Fees for water samples is (5000) kyat and Soil and other commodities are (8000) Kyat for each element.
We issue the analytical results by certification. The analytical results certificate is as follow.
Certificate of Heavy Metal Analysis
Procedures of application for Mycotoxin Analysis ​
မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်သွင်း(သို့) တင်ပို့မည့် စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များတွင် မှိုအဆိပ်ပါဝင်မှု ရှိ/မရှိ ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေး စမ်းသပ်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်၍ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရပါမည်။
တင်သွင်း(သို့) တင်ပို့လိုသည့် စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန် ၂၀ မက်ထရစ်တန်လျှင် နမူနာ ၁ ကီလိုဂရမ် (သို့)
၁လီတာ ပေးပို့ရမည်။ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးစမ်းသပ်ခကို နမူနာ တစ်မျိုးလျှင် ၁၀၀၀၀ကျပ် နှုန်းဖြင့် သီးနှံ ကာကွယ်ရေး ဌာနခွဲ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးသွင်းရမည်။ အထက်ပါအချက်အလက်များပြည့်စုံပါက ပိုးသတ်ဆေးဓါတ် ကြွင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုအဖြေအား ထောက်ခံစာထုတ်ပေးပါသည်။
The sample shall be submitted with 1 KGM / 1 LTR according to the specified sampling method. Importer or Exporter shall pay analytical fees 10000 Kyats for one sample to Plant Protection Division, Department of Agriculture. After scrutiny of above particulars and requirements, Pesticide Analytical Laboratory, Plant Protection Division issues certificate of residue analysis.
Procedures of application for Import Endorsement of Registered Pesticides ​
မှတ်ပုံတင်ရရှိပြီးသောပိုးသတ်ဆေးများအား မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့တင်သွင်းခြင်းမပြုမီ လျှောက်လွှာတွင် ပါဝင်သော အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်၍လိုအပ်သော ပူးတွဲချက်များနှင့်အတူ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲသို့ တင်ပြလျှောက်ထား ရပါမည်။
၁၁။ အဆောက်အအုံအမျိုးအစား(အမိုး၊ အကာ၊ အခင်း)
၁၃။ လက်လီ၊ လက်ကားရောင်းချမည့် ပုဂ္ဂိုလ် ၊အဖွဲ့အစည်းများ၏ အမည်နှင့် နေရပ်လိပ်စာ
၁။ လတ်မှတ်ရပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲသူ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်
(အဆိပ်အတောက် ပြင်းထန်သည့် ပိုးသတ်ဆေးကိုသုံးစွဲရာတွင် ကျွမ်းကျင်စွာကိုင်တွယ် သုံးစွဲနိုင် သူဖြစ်ကြောင်းမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ကအသိအမှတ်ပြုထားသူကိုဆိုလိုပါသည်။)
၄။ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိထားသူဖြစ်သည့် ပိုးသတ်ဆေးထုတ်လုပ်သူထံမှ သက်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သူများအား တင်ပို့ခွင့်၊ တင်သွင်းခွင့်၊ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့် သဘောတူညီချက်။
၅။ အသင့်ဖော်စပ်ပြီးသော ပိုးသတ်ဆေးကို ပြည်ပမှပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းလိုသူသည် ပေးဆောင်ရမည့် ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခကို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သော မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် သတ်မှတ် သည့်နည်းလမ်း အတိုင်း ပေးဆောင်ရမည်။
၂၀ မက်ထရစ်တန်အတွက် ၃၀၀၀၀၀ကျပ် (အရည်၊အခဲ၊ အမှုန့်)
ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးစမ်းသပ်ခကို မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ နေပြည်တော်ရှိ စာရင်းအမှတ် - MD 012058 (စိုက်ပျိုးရေး) တွင် ပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက် အထားမူရင်း တင်ပြရန်လိုအပ်ပါသည်။
၆။ အထက်ပါအချက်အလက်များပြည့်စုံစွာစစ်ဆေးပြီးပါက တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး၊ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင် အဖွဲ့မှ ပိုးသတ်ဆေးတင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံစာအား ထုတ်ပေးပါသည်။
၇။ ပြည်ပမှတင်သွင်းသော ပိုးသတ်ဆေးများရောက်ရှိလာပြီးနောက် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ စစ်ဆေးမှုကို မပျက်မကွက်ခံယူရမည်။ အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်အတွက် နမူနာရယူရန် သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်း အတိုင်း သတ်မှတ်ထားသည့်နမူနာအရေအတွက်(သို့မဟုတ်) အလေးချိန် ကို အခမဲ့ရယူခွင့်ပြုရမည်။
၂၀ မက်ထရစ်တန်အတွက် ၁ လီတာ / ၁ ကီလိုဂရမ်
The importer of registered pesticide, before importation, shall duly fill the application form with the following particulars and attachments and submit to the Co-secretary of Pesticide Registration Board (Plant Protection Division)
Name of Importer / company
Pesticide Registration No
Amount to be imported
Address of premises in which the pesticide will be stored and distributed
Type of building (Roof, wall, floor)
Name and address of wholesale dealers / retailers / organizations.
Copy certificate of pesticide applicator
(A person recognized by the registration board as being qualified in the use of highly toxic pesticides.)
Label instruction in Myanmar Language
The consent of holder of registration and manufacturer of pesticides in which manufacturer authorizes respective parties for exporting, importing and distribution, and marketing in Myanmar.
Any person desirous of importing any registered pesticide into the country shall pay analytical fees prescribed by the registration Board in foreign currency and in accordance with the procedure laid down.
Import amount of pesticide Analytical Fees
Each 20 Metric Tons 300,000 Kyat for Liquid/Granules/Powder
The original payment receipt of analytical fees to Myanmar Economic Bank, Nay Pyi Taw, (Agriculture) Account No –MD012058 is subjected to submit to Plant Protection Division.
6. After scrutiny of above particulars, attachments and requirements, secretary of Pesticide Registration Board issues an endorsement with respect to the application ofaperson desirous of pesticide importation in the country.
The imported pesticide, on arrival, shall be subjected to inspection by the Plant Protection Division, Department of Agriculture without failure in order to inspect the quality.
The sample shall be submitted with the following specified quantity or weight of sample according to the specified sampling method and free of charge.
Import amount of pesticide Amount of sample to be submitted
Each 20 Metric Tons 1 LTR / 1KGM